Iindaba - Ukuqhambuka okutsha kweHlabathi kwakhona, okubangelwa ngu-Omicron BA.2
Xa uqhambuko lwe-Omicron luphela eCanada, iliza elitsha lobhubhani wehlabathi sele liqalile kwakhona!Okumangalisayo kukuba, ngeli xesha, yayiyi "Omicron BA.2", eyayikade ithathwa njengento esongelayo, eyaguqula ihlabathi.
Ngokutsho kweengxelo zeendaba, ukuqhambuka kwe-Asia kutshanje kubangelwa yi-Omicron BA.2.Olu lwahlulo lugqithisekile ngama-30 ekhulwini kune-Omicron.Ukususela ekufumaneni kwayo, i-BA.2 ifunyenwe ubuncinane kumazwe angama-97, kuquka iCanada.Ngokutsho koMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO), i-BA.2 ngoku iye yabala enye kwiimeko ezintlanu kwihlabathi jikelele!
Nangona iimeko ze-COVID-19 ngoku ziyancipha kuMntla Melika, umlinganiselo wamatyala abangelwa yi-BA.2 uye wanda kwaye wodlule i-Omicron kumazwe angama-43 ubuncinci!Xa sasinexhala lokuba i-Deltacron (inhlanganisela ye-Delta + Omicron) inokuzisa intlekele kwihlabathi, i-BA.2, ithule ngokuthula.
E-UK, amatyala amatsha angama-170,985 anyuke kwiintsuku ezi-3 ezidlulileyo.Lilonke inani lamatyala abosulelekileyo ngoMgqibelo, ngeCawa nangoMvulo laliphezulu ngama-35% kuneveki ephelileyo.
Idatha ibonisa ukuba inani losulelo liyanda e-UK, kwaye iScotland ifikelele kwinqanaba eliphezulu ukusukela kunyaka ophelileyo.
Nangona kungekho sigqibo esisemthethweni sokuba ukunyuka kuhambelana ne-BA.2, idatha ibonisa ukuba i-BA.2 yadlula i-Omicron kwiiveki ezimbalwa emva kokufunyanwa kwayo e-UK.
EFransi, abasemagunyeni kwezempilo baseFransi banike ingxelo ye-18,853 yamatyala amatsha ngoMvulo, ukonyuka kwe-10 ngokulandelelana ukusukela ekupheleni kwamanyathelo okuvalelwa kweli lizwe.
Ngoku, umndilili yenani lamatyala amatsha ngosuku kwiintsuku ezi-7 ezidlulileyo lifikelele kuma-65,000, elona nqanaba liphezulu ukusukela nge-24 kaFebruwari.Ukulaliswa esibhedlele kuye kwanda, kwaye kwasweleka abantu abatsha abayi-185 kwiiyure ezingama-24, bafikelela kwelona nyuso likhulu kwiintsuku ezili-10.
EJamani, inani losulelo lonyuke kwakhona kwaye umyinge weentsuku ezisixhenxe ufikelele phezulu.
Ukonyuka okufanayo kwenzeka eSwitzerland, ephelise phantse yonke imigaqo-nkqubo yokuvalelwa kwabantu ngaphambili.
E-Australia, umphathiswa omtsha wezempilo wasezantsi uBradHazzard uxelele amajelo eendaba ukuba inani leemeko ezintsha zemihla ngemihla zinokuphinda kabini phakathi kweeveki ezine ukuya kwezintandathu njengoko i-BA.2 subvariant ixhaphake kakhulu kulo mmandla.
ICanada isandula ukuchacha ekuqhambukeni kwe-Omicron, kwaye akukho kunyuka okubalulekileyo kufunyenwe kwiimeko ngoku.
Kodwa ngeengxelo zangaphambili ezibonisa ukuba i-BA.2 sele isasazeke eCanada, iingcali zilumkisa ukuba kunzima ukuqikelela isimo sokwenene se-BA.2 eCanada ngenxa yokunciphisa uvavanyo lwe-nucleic acid kumaphondo.
Namhlanje, uMbutho wezeMpilo weHlabathi usihlaziyile isilumkiso sokuba kusesekuseni kakhulu ukukholelwa ukuba ubhubhane uphelile njengoko intsholongwane iqhubeka nokusasazeka phakathi kokwanda kweYurophu kwezi veki zidlulileyo.Ukuphakamisa izithintelo kunye nokuvumela amatyala ukuba anyuke kuya kudala ukungaqiniseki.Ukunciphisa izithintelo kuvula umnyango kwezi ntsholongwane.
Ukujongana nentsholongwane, mhlawumbi into eyoyikisayo ayiyiyo intsholongwane ngokwayo, kodwa i-sequelae.Amayeza okugonya anokunciphisa ukugula okuqatha, ukulaliswa esibhedlele kunye nokufa, kodwa nezona mpawu zibuthathaka ze-COVID-19 zinokubangela ingozi engenakulungiseka.
Izifundo zangaphambili zibonise ukuba iimeko ezibuthathaka ze-COVID-19 zinokubangela ukuncipha kwengqondo kunye nokuguga kwangaphambi kwexesha;Kodwa uphando lwakutsha nje luveze enye inyani eyoyikisayo: Ikota yabantwana abosulelwe yi-COVID-19 baya kukhula babe yi-COVID ende.
Ngokutsho kophononongo, kubantwana abangama-80,071 abosulelwe yi-COVID-19, iipesenti ezingama-25 baye baneempawu ezithatha ubuncinane iiveki ezi-4 ukuya kwezili-12.Ezona ngxaki zixhaphakileyo ziingxaki ze-neurological and psychiatric ezifana neempawu zeemvakalelo, ukukhathala, ukuphazamiseka kokulala, intloko ebuhlungu, utshintsho lwengqondo, isiyezi, iingxaki zokulinganisela, njl.
Ukuhlonela intsholongwane kunye nothintelo olukhulu lobhubhane luselukhetho lwethu olulumkileyo xa singenako ukuyilawula intsholongwane.
Ixesha lokuposa: Mar-21-2022